Qatar Airways waxay soo bandhigtay Boeing 787-9 Dreamliner cusub oo leh Suugaan Ganacsi oo cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » Qatar Airways waxay soo bandhigtay Boeing 787-9 Dreamliner cusub oo leh Suugaan Ganacsi oo cusub » Page 2
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Suugaanta Fasalka Ganacsiga, wuxuu isu beddelaa sariir dhererkeedu dhan yahay 79 ”, oo bixisa heerar sare oo raaxeysan oo dusha sare ah. Rakaabku way nasan karaan inta ay duulimaadkooda socdaan, iyagoo og in qalabkooda moobiillada shaqsiyeed uu si badbaado leh ugu kaydsan yahay haystaha taleefanka heeganka ah, oo ay ku rakiban yihiin tikniyoolajiyad lacag-la'aana oo lacag-la'aana oo ku habboon labada qalab ee iOS iyo Android.
Qaybta Ganacsiga ee 'Class Class Suite' waxaa lagu soo kordhiyey adeegga shirkadda hoggaanka sare ee shirkadda duulimaadkeeda shaqaalaheeda ku guulaystay abaalmarinta. Tan waxaa ku jira xulasho ballaaran oo ah cunnooyinka caalamiga ah, cuntada iyo cabbitaannada, iyo sidoo kale xulashooyinka cunnooyinka vegan ee caafimaadka qaba oo qayb ka ah liiska diyaaradda Qatar Airways 'à la carte dine-on-demand. Kaliya maahan rakaabku inay ku raaxeysan doonaan cunnooyinka abaalmarinta ku guuleysta, rakaabka qaaliga ah waxaa lagu waafajinayaa alaabooyin iyo adeegyo laga helo noocyo caalami ah oo ay ka mid yihiin Narumi, BRIC'S, diptyque, TWG Tea, Castello Monte Vibiano Vecchio iyo The White Company si aad u magacowdo inyar.
Fasalka Dhaqaalaha, kuraasta dib loo soo saaray ee Recaro waxay tusaale u yihiin naqshaddii ugu dambeysay iyo tikniyoolajiyadda. Kursi kasta waxaa lagu qalabeeyaa 13-inch Panasonic IFE shaashadda taabashada marka lagu daro qalab elektaroonig ah oo shaqsiyeed oo wata aaladaha mobilada iyo iPad-ka. Kursigu wuxuu leeyahay a armrestrestable armrest oo gebi ahaanba lagu jiidi karo dhabarka dambe, iyadoo bixinaysa waayo-aragnimo aad u raaxo badan oo waasac ah. Rakaabku waxay ku raaxeysan doonaan waayo-aragnimada cunnada oo buuxa 'Quisine', oo bixisa khibrad safar oo heer sare ah.
Iyadoo si diiran loogu soo dhoweeyay diyaaradda cusub, Qoraaga Rasmiga ah ee Qatar Airways, Dana Al Fardan waxay sameysay mucjiso cusub oo muujineysa aragtida wadajirka ah ee Qatar Airways iyo Dana ka wadaagaan isu keenida dadka. Ka dib waqtiyadii ugu dambeeyay ee adag, muusigani wuxuu u taagan yahay baraarug iyo faham qoto dheer oo ku saabsan qiimaha dhabta ah ee dadka, wada noolaanshaha iyo adkeysiga.
Boeing 787-9 ayaa ah xubintii ugu dambeysay ee diyaaradaha Boeing ee diyaaradaha Qatar Airways. Maaddaama Bariga Dhexe ay macaamiisheeda u soo bandhigtay Boeing 787, shirkaddu waxay sii waday inay duullimaadkeeda ah 30 787-8s ay ku sii faafto guud ahaan cudurka COVID-19 sababo la xiriira waxtarka shidaalka oo xooggan iyo rikoodh lagu kalsoonaan karo oo aad u wanaagsan. Maalgashiga Qatar Airways ee 787-9 wuxuu mar kale hoosta ka xariiqayaa sida ay shirkadda uga go'an tahay joogtaynta iyo ku guuleysiga qiiqa kaarboonka nadiifka ah sanadka 2050.